Bonke abazali bafuna izingane zabo ziphephe futhi ziphilile.
Bonke abazali bafuna izingane zabo ziphephe futhi ziphilile. Ngaphandle kokudla, izingubo nokunye, izinto zefenisha lapho izingane ezincane zilala khona, zihlala futhi zidlale nakho kubalulekile kakhulu ukuletha imvelo ehlanzekile. Nazi izeluleko zakho. Ukususa uthuli oluvama lwefenisha yakho, sula nge ...Funda kabanzi »
ICoronavirus (COVID-19) nokunakekela izingane zakho
Uma unengane eyodwa noma ezimbili noma ngaphezulu, qhubeka nokulandela izeluleko zezempilo zomphakathi: 1.Awukwazi ukuthembela ezinganeni ukuthi zilethe izihloko ezinzima. ngakho-ke udinga ukuzethula njengomthombo wolwazi. Imininingwane ye-2.Keep ilula futhi iwusizo, izama ukugcina ingxoxo ikhiqiza futhi inesimo esihle ....Funda kabanzi »
Uma ukhulelwe, qiniseka ukuthi uyasazi isiluleko, esishintsha njalo: Abesifazane abakhulelwe baye balulekwa ukuba banqamule ukuxhumana nabantu amasonto ayi-12. Lokhu kusho ukugwema imibuthano enkulu, ukuhlangana nomndeni nabangane noma ukuhlangana ezindaweni ezinkudlwana zomphakathi ezinjengamakhofi, iresidan ...Funda kabanzi »
ICoronavirus (COVID-19) nokunakekela ingane yakho
Siyazi ukuthi lesi yisikhathi esikhathazayo kuwo wonke umuntu, nokuthi ungahle ube nokukhathazeka okuthile uma ukhulelwe noma unengane noma unezingane. Sihlanganise izeluleko nge-coronavirus (COVID-19) futhi sizinakekela ezitholakala njengamanje futhi sizoqhubeka ukubuyekeza lokhu njengoba sazi okuningi. Uma u ...Funda kabanzi »
Igayidi yokugcina ingane yakho iphephile futhi iqinisekiswa njengoba kusatshalaliswa i-coronavirus
Isikhathi sokuthumela: Apr-26-2020
Siyazi ukuthi lesi yisikhathi esikhathazayo kuwo wonke umuntu, nokuthi ungahle ube nokukhathazeka okuthile uma ukhulelwe noma unengane noma unezingane. Sihlanganise izeluleko nge-coronavirus (COVID-19) futhi sizinakekela ezitholakala njengamanje futhi zizoqhubeka zivuselela lokhu ...Funda kabanzi »
Kungani umntwana we-playpen elusizo?
Isikhathi sokuthumela: Mar-20-2020
Ababelethi abanokuhlangenwe nakho kwengane kufanele bazi ukuthi uma bebeka ingane yabo embhedeni, abazali bangase bakhathazeke ngokuthi bayohlukumezeka ingane, ngakho-ke ngeke balale kahle ubusuku bonke; futhi lapho umntwana elele, ngenxa yezimpawu zomzimba wengane, uyobheka futhi abonane ngezikhathi ezithile ...Funda kabanzi »
Uyikhethile ingubo yomntwana efaneleyo?
Ngabe kuyadingeka baby kit? Wonke umzali unemibono ehlukile. Omama abaningi bacabanga ukuthi kwanele ukuba ingane nabazali balale ndawonye. Akudingekile ukubeka ubhekeni wengane ngokuhlukile. Kuyinto elula futhi ukondla ngemuva kokuvuka ebusuku. Enye ingxenye yabazali ibona sengathi ...Funda kabanzi »
Ungayikhetha kanjani isihlalo esiphakeme sengane?
Isikhathi sokuthumela: Feb-01-2020
Ingane iyithemba lomndeni, ingane ikhule usuku nosuku, umama nobaba ubonwa ngampela emehlweni noma enhliziyweni, kusukela ekuzalweni kuya ku-babble, kusuka ebisini ukuze azondle, kudingeka anakekele umama nobaba, kulesi sigaba, khetha ukuthi udle isihlalo sokudla futhi ku-ajenda, ngakho-ke ukukhetha ...Funda kabanzi »
I-2019 Kind + Jugend Fair
Isikhathi sokuthumela: Dec-30-2019
Sanibonani nonke, Sizohamba no-2019 K + J Baby International to Teenager Fair ngesikhathi sikaSep 19 ~ 22, 2019 eKoeln, eGermany. Uyemukelwa ukuvakashela ukuma kwethu (11.3 E-056) nemikhiqizo emisha, ngethemba lokuthola amathuba amaningi okukusebenzela! Okuhle kakhulu mayelana ne-Faye Living Funda kabanzi »
Bonke abazali bafuna izingane zabo ziphephe ...